जापान जानलाई भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ ? त्यासो हो भने केही समय पर्खनूस् !
काठमाडौं । तपाईं जापान जाने तयारीका लागि भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ त्यासो हो भने केही समय पर्खनूस् । अब जापान गएर एकमहिने तालिम नलिएको शिक्षकसँग जापानी भाषाको तालिम लिए त्यो ब्यर्थै हुनेछ । जापानको रोजगारीलाई लक्ष्य गरी नेपालमा सयौंको संख्यामा जापानी भाषा सिकाउने तालिम केन्द्र खुलेका छन् ।
जथा भावी खुलेका यस्ता तालिम केन्द्रले राम्रोसँग भाषा नसिकाउने र भविष्यमा आफू लाई समस्या पार्न सक्ने भन्दै जापान सरकारले नेपालका लागि आफैंले शिक्षकको व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा रुद्र खण्डाकाले लेखेका छन् ।
रोजगारीका लागि नेपालसहित नौ देशका कामदारहरू लिने जापानको पछिल्लो निर्णयपछि नेपालमा पनि जापानी भाषा सिक्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसैले ठगीरोक्ने उपायहरूको एउटा खाका बनाउन लागिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। जापानी भाषा सिकाउने संस्थाहरूले भने विगतमा विद्यार्थी भिसामा जापान जानेहरूका लागि बनाइएको पाठ्यक्रमकै आधारमा अहिले पनि जापानी भाषा सिकाउने गरिएको छ।